Ulefone Gemini ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း | € 117 အတွက် dual ကင်မရာနှင့်လူမီနီယံပါသောစမတ်ဖုန်း Androidsis
သုံးသပ်ချက် Ulefone Gemini, ကင်မရာနှစ်လုံးပါ ၀ င်သောစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးသည်စျေးနှုန်းကြီးလှသည်
ဤအချိန် ကျနော်တို့ Ulefone Gemini ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဒီ 2017 အတွက်ထုတ်လုပ်သူ Ulefone အတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအလောင်းအစားဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည့်အရဤကဏ္inတွင်စစ်ပွဲများစွာဖြစ်ပေါ်စေမည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ Gemini ကစမတ်ဖုန်းပဲ သာ 117 €အဘို့ သင့်ကိုအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုပေးထားတယ်။ လူမီနီယံကိုယ်ထည် y dual-dual ကင်မရာ ၎င်းသည်ဒုတိယလေယာဉ်များကိုမှုန်ဝါးစေသည့်အခါအထူးသဖြင့်ရလဒ်ကောင်းများရရှိစေသည်။
2 Ulefone Gemini မျက်နှာပြင်
3 Ulefone Gemini ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
3.1 Ulefone Gemini အချက်အလက်စာရွက်
4 Ulefone Gemini ကင်မရာ
5 Ulefone Gemini ၏ဘက်ထရီ၊ အလေးချိန်နှင့်အရွယ်အစား
8 စျေးနှုန်းနှင့်ဘယ်မှာ Ulefone Gemini ဝယ်ဖို့
9 Ulefone Gemini ဓာတ်ပုံပြခန်း
ဆောင်းပါး၏နိဒါန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ Ulefone Gemini ၏ဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ထည်ကိုအလူမီနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်ထိတွေ့မှုအတွက်အရည်အသွေးတစ်ခုခံစားမှုကိုသယ်ဆောင်ပေးပြီးဘောင်းဘီနှင့်အတူအဝိုင်းအနားများနှင့်အတူနောက်ဆုံးရလဒ်ကိုအလွန်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်။
လက်ျာဘက်၌၎င်းတွင် SIM ကဒ်များနှင့်ကဒ်တစ်ခုအတွက်ကဒ်ပြားပါရှိသည် ကင်မရာဖြတ်လမ်းခလုတ် အရာကအရမ်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်ရိုးရာခလုတ်များ၊ စက်ပစ္စည်းဖွင့်ပိတ်နှင့်ခလုတ်ကိုတွေ့ရသည်။ ခလုတ်များအားလုံးကိုအလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးထိတွေ့ခံစားမှုကောင်းမွန်သည်။
အပေါ်ပိုင်းမှာတော့ mini-jack output သာရှိတာမို့အောက်ပိုင်းမှာ fingerprint reader, microUSB type C input နှင့်စမတ်ဖုန်း၏စပီကာ output တို့ကဲ့သို့ home ခလုတ်ကိုသာတွေ့နိုင်သည်။
terminal က သုံးအရောင်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် (မီးခိုးရောင်၊ ရွှေရောင်နှင့်အနက်ရောင်) အားလုံးသည်အလွန်ကြော့ရှင်းပြီးအရသာကောင်းမွန်ပါသည်။
Ulefone Gemini မျက်နှာပြင်
Ulefone Gemini ၏မျက်နှာပြင်သည် FullHD resolution နှင့်အတူ 5,5 လက်မ နှင့်တစ် ဦး သိပ်သည်းမှု တစ်လက်မလျှင် ၃၀၀ pixels ရှိသည် သော Sharp ကထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရှိပါတယ် Corning Gorilla Glass3ကာကွယ်မှု နှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းများပေါ်တွင်အလွန်ကောင်းသောကြည့်ရှုကြောင်းဂန္ 2.5D arched ။
အရှေ့ဘက်ရှိတစ်ခုတည်းသောခလုတ်မှာ HOME ခလုတ် / လက်ဗွေဖတ်စက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အများအားဖြင့်ဆိပ်ကမ်းများစွာတွင်တွေ့နိုင်သည့်အရန်ခလုပ်များမရှိပါ။ ၎င်းသည်အရသာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိတွေ့နိုင်သောအရန်ခလုတ်များကိုပိုမိုနှစ်သက်သောသူများနှင့်၎င်းတို့ကိုဖန်သားပြင်တွင်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် Gemini ယူဆောင်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့အားပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Ulefone Gemini ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
Ulefone Gemini တွင် Processor တစ်ခုထည့်သွင်းထားသည် Mediatek MTK6737 de 1.5GHz မှာ quad core ကို GPU ပါ ၀ င်သည် ARM Mali-T720 MP2။ ၎င်းသည် RAM နှင့် ROM မှတ်ဥာဏ်အဆင့်တွင်ရှိသည် LPDDR3 RAM ၏ 3GB နှင့်အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ် ROM ကို 32 GB ကို.
ဤအချက်အလက်များ၏အဆင့်တွင် ROM ၏မှတ်ဉာဏ်သည်စမတ်ဖုန်း၏ကျန်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အနည်းငယ်မျှဆင်တူသည်၊ သို့သော် microSD ကဒ်ကို အသုံးပြု၍ ၂၅၆ GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်မှာမှန်ပါသည်။
ဤ terminal သည်သာမန်အသုံးပြုမှုအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည် (အင်တာနက်၊ လူမှုရေးကွန်ယက်များ၊ ဓာတ်ပုံ၊ အီးမေးလ်၊ အလင်းဂိမ်းများ) ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုမိုစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုလိုအပ်သောပိုမိုလေးသောဂိမ်းများကိုကစားရန်အကြံပြုခြင်းမရှိပါ။ Gemeni တွင်သူ့အစ်ကို၏နာမည်အောက်တွင်ရှိသောအစ်ကိုကြီးရှိသည် Ulefone Gemini Pro ၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောသုံးစွဲသူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
စက်ရုံလည်ပတ်မှုစနစ်သည် Android 6.0 Marshmallow ။
Ulefone Gemini အချက်အလက်စာရွက်
ရှုထောင့် X ကိုက x 15.40 7.68 0.91 စင်တီမီတာ
အလေးချိန် 185 ဂရမ်
အရောင်များ "အနက်ရောင် မီးခိုးရောင် ရွှေ "
2G အဖွဲ့များ ဂျီအက်စ်အမ် 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
3G အဖွဲ့များ WCDMA 900 / 2100MHz
4G အဖွဲ့များ FDD-LTE 800/1700/1800/2100/2600MHz
SIM အမျိုးအစား micro SIM
Display နည်းပညာ «5၏ LTPS မျက်နှာပြင် ၅ လက်မ Corning Gorilla Glass5ကာကွယ်မှုနှင့် resolution ကို3x 1920 Pixels (1080ppp) တွင်ပြသထားသည်။ Multitouch နည်းပညာ»
စီပီယူ 6737 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် MTK1.5 Quad Core
GPU ကို Mali-T720 @ 600MHz
RAM ကို 3GB LPDDR3
ROM မှတ်ဉာဏ် 32GB
SD ကဒ်အထိုင် 256GB အထိ microSD
operating system Android 6.0 ထွက်ပေါ်လာ
နောက်ကင်မရာ « 13 MP + 5.0 MP dual dual ကင်မရာဖြင့် Bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည် ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း ထိတွေ့အာရုံစိုက်ပါ LED flash နှင့် autofocus ။ »
ရှေ့ကင်မရာ5MP (ဆော့ဖ်ဝဲအားဖြင့် 8MP မှ Interpolatable)
port ကို « Micro USB အမျိုးအစား C မီနီဂျက် ၃ ၅ မီလီမီတာ»
ဝိုင်ဖိုင် 802.11a/b/ g / n /
GPS စနစ် "ဂျီပီအက်စ် Glonass »
NFC ကို မရရှိနိုင်ပါ
အခြားဒေတာ «လက်ဗွေစကင်နာ ဆွဲငင်အားအာရုံခံကိရိယာ သံလိုက်အိမ်မြှောင်"
box ကို contents တွေကို « 1 x Ulefone Gemini 1 x ကို USB Cable ကို 1 x ပါဝါ adapter 1 x ကိုလက်စွဲစာအုပ် 1 x ဖြစ်ရပ်မှန်»
Ulefone Gemini ကင်မရာ
ယခုမှာ Ulefone Gemini ၏အားသာချက်များအနက်အခြားတစ်ခုဖြစ်သည် နောက်ကင်မရာနှစ်ခု ကဖွဲ့စည်းခဲ့သည် ကင်မရာ2လုံး သီးခြားစီစီစဉ်ထားသည်။ သို့သော်ရှေ့တန်းရှိအရာဝတ္ထုနှင့်လူများကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်အတွက်မှန်ဘီလူးမှတစ်ဆင့်ရုပ်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းများ (များသောအားဖြင့်နောက်ခံ) ကိုမှုန်ဝါးစေရန်ကင်မရာတစ်ခုတည်းအဖြစ်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အလွန်အနုပညာဓာတ်ပုံများကိုရရှိစေပြီးအလွန်ထူးခြားသောရလဒ်ကိုရရှိနိုင်သည်။ ဤကင်မရာနှစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကကင်မရာသည် resolution ရှိသည် 13MP အထက်တန်းကျောင်း5ရှိပါတယ်နေစဉ်MP.
ပြီးခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုတွင်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရိုက်ကူးမည့်ဓာတ်ပုံအမျိုးအစားများကိုသင်တွေ့နိုင်သည် Bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှု.
ရှေ့ကင်မရာက 5MP ရှိပြီးဆော့ဖ်ဝဲကနေ 8MP အထိချဲ့နိုင်မှာပါဖြစ်စေမဆိုးသည်။
Ulefone Gemini ၏ဘက်ထရီ၊ အလေးချိန်နှင့်အရွယ်အစား
ဒီစမတ်ဖုန်းမှာအတွင်းပိုင်းဖြုတ်တပ်လို့မရတဲ့ဘက်ထရီပါ ၀ င်တယ် 3250mAh သာမန်အသုံးပြုမှုအောက်တွင်တစ်နေ့တာလုံးရေရှည်တည်တံ့သည်။
အရွယ်အစားရှိပါတယ် X ကိုက x 15.40 7.68 0.91 စင်တီမီတာ နှင့်အလေးချိန် 185 ဂရမ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်အတွင်းရှိအပေါ့ပါးဆုံးဆိပ်ကမ်းများထဲမှတစ်ခုကိုမရင်ဆိုင်ရပါ။ သို့သော်သူတို့၏အလေးများကိုကောင်းစွာဖြန့်ဝေထားသောကြောင့် terminal ကိုလက်ကိုင်ထားခြင်း၏ခံစားချက်သည်အတော်လေးသာယာသည်။
အနိမ့် ROM မှတ်ဉာဏ်
စျေးနှုန်းနှင့်ဘယ်မှာ Ulefone Gemini ဝယ်ဖို့
Ulefone Gemini ၏ဈေးသည်ယူရို ၁၁၇ ဖြစ်ပြီး၊ သင်ဒီမှာကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အားလုံးအာမခံချက်နှင့်အတူယခုဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာနှင့်အတူကြောင်းအလယ်အလတ်အကွာအဝေး၏ terminal တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း နောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်ဂိမ်းများကစားရန်မလိုအပ်သူများအတွက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များပေးထားသည်။ အကယ်၍ သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုအင်တာနက်အသုံးပြုရန်၊ အီးမေးလ်များကိုဖတ်ရန်၊ ရေးရန်၊ လူမှုရေးကွန်ရက်များကိုသုံးရန်နှင့်အလွန်ခက်ခဲသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုအသုံးပြုရန်အတွက် ကအလွန်ကြီးစွာသောဝယ်ယူ option ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည်အလွန်လှပသည်၊ ၎င်းသည်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင်အလယ်အလတ်တန်းစားတွင်ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည့်အကောင်းဆုံးကင်မရာနှစ်လုံးထဲမှတစ်ခုကိုပေးသည်။
Ulefone Gemini ဓာတ်ပုံပြခန်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » သုံးသပ်ချက် Ulefone Gemini, ကင်မရာနှစ်လုံးပါ ၀ င်သောစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးသည်စျေးနှုန်းကြီးလှသည်
မင်္ဂလာပါ။ SIM ကဒ်အကွက်ကိုသင်ဘယ်မှာဝယ်နိုင်လဲ။